घूसकाण्डमा मुछिएका डिभिजन सिँचाई दोलखाका प्रमुख किर्ते अभियोगमा पुनः पक्राउ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७६, आईतवार १४:५८ लेखक नेपाली जनता
दोलखा । घूस काण्डको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन दोलखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी सरकारी छाप र लेटरप्याड किर्ते गरेको अभियोगमा पुनः पक्राउ परेका छन् ।
१४ लाख नगदसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरी घूस अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेकोमा उनलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसपछि फरार उनी पुनः पक्राउ परेको प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले बताए ।
चितवन रत्ननगर नगरपालिका ४ घर भई किर्तिपुर नगरपालिका २ बस्दै आएका उनलाई प्रहरी टोलीले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको हो । उनलाई शनिबार दोलखा ल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १४ लाख बोकेर सरकारी गाडीबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा उनी बाटैमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि आख्तियारको टोलीले छापा मार्दा उनको कार्यकक्षबाट नक्कली छाप र लेटरप्याड तयार गरी किर्ते गरेको कागज फेला परेको थियो ।
अख्तियारले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा उक्त छाप र लेटरप्याडहरु पठाएर किर्ते ठहर भएपछि दोलखा प्रहरीलाई प्रतिवेदनसहित पठाएको थियो । त्यसैको आधारमा फरार अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक राईले बताए । अधिकारीलाई प्रहरी कार्यालय दोलखाको हिरासतमा राखिएको छ ।
यी हुन्, सेक्स गर्नुअघि पुरूषले जान्नैपर्ने ४ कुरा !
एजेन्सी । सेक्सका बारेमा महिला पुरुष दुबै धेरैभन्दा धेरै कुराहरु जान्न चाहान्छन् । तर उनीहरु कुरा गर्न लजाउँछन् ।…
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुले पुसमा पिए नियुक्त गरेपनि साउनदेखिकै तलब लिएका छन् । २५ असोजमा ऐन पारित गर्दै…
मेषः– सानो कुरालाई लिएर पारिवारिक द्वन्द्व चल्न सक्छ सचेत रहनुुहोला । साना साना कुराले भोलीका दिनमा असर गर्नेछ ।…
काठमाडौँ । कतार नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा लैजान विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका…
करार शिक्षक नियुक्तिको तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले अस्थायी शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि खाली रहेको दरबन्दीमा तत्काल करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको…
तरलता अभावको असरः बैंकले कर्जा दिन छाडे, अब के हाेला ?
काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी अभावमा बैंकले कर्जा दिन छाडेका छन् । २८ बाणिज्य बैंकमभ्ये सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंकबाहेक अरु सबैले…
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति7views